Momba anay | Ny fanafarana ny fiarako
Manampy amin'ny fisoratana anarana fiara an-jatony any Royaume-Uni izahay isam-bolana. fitendry_arrow_down
Na aiza na aiza misy anao eto amin'izao tontolo izao, dia ho azonay atao ny mandray an-tanana ny dingana rehetra amin'ny fanafarana sy ny fisoratana anarana.
Izahay dia manana tambajotram-pifandraisana manerantany manerana ny kaontinanta rehetra hanome anay fahalalana hatramin'ny farany sy fahatokisana eo an-toerana na aiza na aiza no misy ny fiaranao.
Izahay ihany no mpanafatra fiara any Angletera nahavita nanambola be dia be tao amin'ny toeram-pitsapana neken'ny DVSA ho an'ny tranonkalantsika. Midika izany fa ireo mpanara-maso DVSA dia mampiasa ny lalam-panadinana eo an-toerana hamoahana ny karazana fankatoavan'ny tsirairay ny fiaran'ny mpanjifanay.
Ho tonga ao amin'ny tranonay ny fiaranay ary hamela fisoratana anarana feno nefa tsy mila entina any amin'ny foibe DVSA izany. Miaraka amin'ny fisianay manerantany sy ny fanoloran-tena mitohy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fanarahan-dalàna UK, izahay dia mpitarika ny tsena eo amin'ny sehatra misy anay. Na manafatra ny fiaranao manokana ianao, manafatra ara-barotra fiara maromaro na manandrana mahazo fankatoavana karazana volavola ambany ho an'ny fiara amboarinao, manana ny fahalalana sy ny fotodrafitrasa izahay hahavitana ny zavatra takinao rehetra.
Izahay no mpanafatra fiara lehibe any Royaume-Uni.
Koa mifandraisa amin'ny fanafarana fiara tsy misy olana.